Guriga - Örnsköldsviks kommun
Omsorg och hjälp Undermeny
- Omsorg och hjälp
- Invandring, integration
- Other languages, public information
Haddii aad qorsheyneysid inaad gurigaada dib u dhisid ku suubisid ama dhul bannaan guri ka dhistid waxaa adiga u baahantahay inta ugu badan oggolansho, oo oggolanshada wax dhisida ama ogeysiinta wax dhisida ey degmada bixiso. Oggolanshada wax dhisida waxaa adiga ka dalban maamulka arrimaha wax dhisida. La xiriir lambarka guud oo degmada, 0660-880 00, oo shaqaalahaas baa ku caawin sidaa xiriir ula yeelatid shaqaalaha arrimaha oggolanshada wax dhisida oo xafaada aad ku nooshahay mas’uulka ka ah.
Biyaha iyo dhuunta biyaha wasaqda
Adiga waa cabbikartaa biyaha tubada oo Iswiidhan. Guryaha inta ugu badan waxey ku xiranyahiin nidaamka tubooyinka biyaha iyo dhuunta biyaha wasaqda. Shirkada degmada oo la dhaho Miva ku shaqo leh biyaha, dhuunta biyaha wasaqda iyo qashinka oo Örnsköldsvik. Adiga Miva waxaa kala xiriiri kartaa qeybta adeega: 0660-330 400 ama e-mailkooda oo ah: info@miva.se.
Qofkii oo ceel kooni haysto qofkaas shaqsiyan buu mas’uul uga yahay tayada biyahaas iyo dhuunta biyaha wasaqda iney tahay mid ansaxsan. Haddii aad su’aalo ka qabtid qaas u lahaan shada biyaha iyo dhuunta biyaha wasaqda adiga waxaa la soo xiriiri kartaa maamulka arrimaha wax dhisida oo degmada. Lambarka guud oo degmada waa, 0660-880 00, ayaga baa ku caawin sidaa qof sax u heshid.
Adiga oo ku nool guri aad iska leedahay qashinka waxaa ku ridi haanta qashinka iyo siin degmada lacag maadaama ey qashinka kaa soo doonaayaan. Haddii aad qashinka laga soocdid iyo qashinka qaarkood keentid goobaha qashinka waxaa nusqaamin kartaa tirada qashinka. Haddii aad sidaa suubisid waxaa yaraanaayo qarashka bixineysid.
Haddii aad ku nooshahay guri kiro adiga qashinkaada waxaa u soo qaadi qolka qashinka oo meeshaas baa ku kala sooci qashinka oo sida ey isku lee yahiin. Qashimada adag ama weeyn tusaale ahaan korsiyada, elektroniga, kiimikaalka iyo qashinka barxada bannaanka waxaa lacag la’aan adiga geenkartaa goobta qashinka ama kuwa marbo xaafad imaadaan.
البلدية و السياسة
الرعاية الصحية و الطبية
الرعاية و المساعدة
العمل و القطاع التجاري و الصناعي
وافد جديد في السويد
وقت الفراغ و الثقافة
Astoáigi ja kultuvra
Bargu ja ealáhuseallin
Dearvvašvuohta- ja buohccedikšu
Dorvvolašvuohta ja sihkkarvuohta
Fuolahus ja veahkki
Gielda ja politihkka
Váldde oktavuođa gielddain
Fürsorge und Hilfe
Gemeinde und Politik
Kontaktieren Sie die Gemeinde
Neu in Schweden
Municipality and politics
Contactar al municipio
Cuidados y ayuda
En la vivienda
Municipio y política
Nuevo en Suecia
Tiempo libre y cultura
Trabajo, industria, comercio
Contactez la commune
Dans le logement
La commune et la politique
Les minorités nationales
Nouveau en Suède
Services de santé, services médicaux
Travail, activité economique
اقلیت های ملی
اوقات فراغت و فرهنگ
برقراری تماس با کمون
بهداشت و خدمات پزشکی درمانی
تازه واردین به سوئد
کار و کسب وکار
کمون و سیاست
کمک و مراقبت
Bezbednost hem sigurnost
Buti hem poslovanje
Kontakterin e opština
Nevo ki Švedska
Njegu hem pomoć
Opština hem politika
Slobodno vreme hem kultura
Bulshada qaranka ka mid ah oo laga tiro badan yahay
Daryeel iyo caawinaad
Daryeelka iyo isbitaalada
Degmada iyo siyaasada
Kalsooni iyo ammaan
Ku cusubtahay Iswiidhan
La soo xiriir degmada
Suuqa shaqada iyo ganacsiga
Xilliga firaaqada iyo dhaqanka
Työ ja elinkeinoelämä
Barkoe jïh jielemh
Eejehtimmie jïh kultuvre
Healsoe- jïh skïemtjehokse
Jearsoesvoete jïh vihtiesvoete
Såjhtoe jïh viehkie
Tjïelte jïh politihke
Vuejnedh jïh tsevtsedh
ሃገራውያን ጉጅለ ህዝቢታት
ርክባት ምስ ኮሙን
ስራሕ ምርካብን ንግዳዊ-ህይወትን
ቤትትምህርቲን ኣወሃህባ ትምህርቲን
ኣብ መቐመጢ ቤትካ
ኣብ ሽወደን ሓድሽ ንዝኾንካ
እቲ ኮሙንን ፖለቲካን